के शर्तमा ७५ वर्षको उमेरमा पनि स्टण्ट गर्न तयार हुन्छन् अमिताभ| Nepal Pati
के शर्तमा ७५ वर्षको उमेरमा पनि स्टण्ट गर्न तयार हुन्छन् अमिताभ
एजेन्सी । ७५ वर्षको उमेर स्टण्ट गर्न खतरा हुन सक्छन् । तर बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलाई यस्तो गर्नमा उमेरले छेकेन । उनका अनुसार पेशाले मागेको काम गर्न उनी हमेशा प्रयासरत रहन्छन् । अमिताभले फिल्म ‘ठग्स अफ हिंदुस्तान’ मा स्टण्ट गरेकाछन् । उनको फिल्म ‘१०२ नट आउट’ पनि चाँडैनै रिलिज हुँदैछ ।
अमिताभसंग जब सोधियो कि बितेका केही समयदेखि उनी बाहिर साक्षात्कार हुनबाट टाढै रहेका छन् किन ? उनले भने, साक्षात्कारको अर्थ हुन्छ एक व्यक्ति प्रश्न सोध्छ अर्काे व्यक्तिले उत्तर दिने हुन्छ । तरर मसंग भन्नको लागि केही थिएन, अनि म साक्षात्कार हुन जरुरत नै छैन । अब मेरो फिल्म रिलिज हुन लागेको छ र हामीले जुन फिल्म दर्शकहरुका लागि बनाउका छौं, उसको प्रचारको लागि साक्षात्कार हुनु आवश्यक र मिडिाका प्रति हाम्रो दायित्व हो । यसकारण म स्वार्थराखेर मिडिया सामु आएको छु ।
अमिताभसंग उनको स्वास्थ्यका बारेमो सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, काम गर्दाको समयमा मलाई केही चोट लागेको छ । जुन आझैछ । यो पहिला काम गरेको समयमा लागेको चोटसंग सम्वन्धित छ । जुन उमेरसंगै बढ्दै आएको छ । उपचारी जारी छ र यो उमेरमा शरीर पुरै स्वस्थ हुनु भनेको सोचाइ मात्रै हो ।’ अमिताभलाई फिल्म ‘१०२नट आउट’ एक सय वर्षको उमेरको भूमिका निभाउँदा कस्तो लाग्यो ? उनले भने, निर्देशक उमेश शुक्ला र पटकथा लेखिका सौम्या जोशीले उनलाई युवा सोच भएको १९२ वर्षीय पात्रको भूमिकाको काहानी सुनाएका थिए र भूमिका निर्वाहको प्रयास पनि गरिएको थियो ।
फिल्म ‘ठग्स फ हिंदुस्तान’ मा खतरनाक स्टण्ट गरेर स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेको बारेमा अमिताभले भने, त्यो स्टंट जवरजस्ती र जोखिम युक्त थियो । तर मै केराको बाक्रामापनि चिप्लिएर लड्नसक्छु । माही पेशाले मागेको माग पुरा गर्ने कोशिसमा रहन्छौं र पर्याप्त साबधानीसंगै अगाडि बढ्छौं ।